Bit By Bit - Ny fandinihana ny fitondran-tena - 2.3.7
Ny fiakaran'ny mponina, ny fampiasana ny fampiasana, ary ny fandehanana an-tsehatra dia manasarotra ny fampiasana loharanom-kaonty lehibe mba handinihana ny fironana maharitra.
Iray amin'ireo tombontsoa lehibe amin'ny loharanom-baovao lehibe maro dia ny fanangonam-baovao amin'ny fotoana. Ireo mpahay siansa sosialy dia miantso io karazana angona antonony io . Ary, mazava ho azy, ny angon-drakitra any amin'ny toerany dia tena zava-dehibe amin'ny fianarana fiovana. Mba hahafantarana tsara ny fiovana, anefa, ny rafitra fandrefesana dia tsy maintsy miorina tsara. Ao amin'ny tenin'olom-pahaizana sosialy Otis Dudley Duncan, "raha te hanova ny fiovana ianao dia aza manova ny fepetra" (Fischer 2011) .
Indrisy anefa fa maro ny angon-drakitra lehibe rafitra, indrindra orinasa rafitra-manova ny fotoana rehetra, ny dingana izay mandresy hiantso aho. Amin'ny ankapobeny, ireo fiovana ireo dia miova amin'ny làlana telo lehibe: ny fiakaran'ny mponina (fiovana amin'ny fampiasana azy ireo), ny fihetsika fitondrantena (fiovana amin'ny fomba ampiasain'ny olona), ary ny fikotranana ny rafitra (fiovan'ny rafitra). Ireo loharanon-drivotra telo dia midika fa ny lamina rehetra ao anaty loharano lehibe dia mety ho vokatry ny fiovana lehibe eto amin'izao tontolo izao, na mety ho vokatry ny karazana drift.
Ny loharanon-drivotra voalohany amin'ny fisotroan-drivotry ny mponina dia vokatry ny fiovana amin'ny fampiasana ny rafitra, ary mety hitranga izany amin'ny fotoana fohy sy lava be. Ohatra, nandritra ny fifidianana filoham-pirenena tamin'ny taona 2012, ny ampahany amin'ny sioka momba ny politika izay nosoratan 'ny vehivavy dia niova isan'andro (Diaz et al. 2016) . Noho izany, ny mety ho fiovana eo amin'ny feon'ny Twitter-andininy dia mety ho fiovàna amin'ny olona miresaka amin'ny fotoana rehetra ihany. Ankoatra ireo fahasamihafana fohy ireo, dia misy ihany koa ny tandindonin-tsokosoko sasantsasany amin'ireo vondrona demokratika sasantsasany manaiky sy mamoy ny Twitter.
Ankoatra ny fiovana amin'ny fampiasana rafitra, misy ihany koa ny fiovana amin'ny fomba ampiasaina ny rafitra, izay antsoiko hoe fitondrantena amin'ny fihetsika. Ohatra, nandritra ny fihetsiketsehan'ny Occupy Gezi tamin'ny 2013 tao Tiorkia, nanova ny tenifototra ireo mpanao fihetsiketsehana rehefa nipoitra ny hetsi-panoherana. Toy izao no namaritan'i Zeynep Tufekci (2014) ny fihodinana amin'ny fihetsika, izay azony hitantarana satria nitandrina ny fitondran-tena tao amin'ny Twitter sy ny olona izy:
"Ny zava-nitranga dia raha vao nanomboka ny hetsi-panoherana dia lasa maro be ny olona ... nampiasa ny tenifototra afa-tsy ny nisarika ny saina ho amin'ny fisehoan-javatra vaovao ... Raha mbola nitohy ny fihetsiketsehana, ary nahery vaika dia maty ny tenifototra. Ny fanadihadiana dia nanambara antony roa amin'izany. Voalohany, raha vao nahalala ny lohahevitra rehetra ny tsirairay, ny tenifototra dia nanjary nanan-danja sy nandanilany ny sehatr'ilay sehatra Twitter. Faharoa, ny tenifototra dia tsy hita afa-tsy hoe mahasarika ny saina ho amin'ny lohahevitra manokana, fa tsy miresaka momba izany. "
Ny karazana fahatapahana fahatelo dia ny fandehan'ny rafitra. Amin'ity tranga ity dia tsy miova ny olona na miova ny fitondrantenany, fa miova kosa ny rafitra. Ohatra, amin'ny Facebook, dia nampitombo ny fetra farany amin'ny fanavaozana ny status. Noho izany, ny fandalinana lavarangana momba ny fanavaozana ny toetr'andro dia mety ho mora amin'ny artifacts vokatry ny fanovana. Ny fikorontanan'ny rafitra dia mifandray akaiky amin'ny olana iray antsoina hoe algorithmika mifangaro, izay hodinihiko ao amin'ny fizarana 2.3.8.
Eo am-pamaranana, loharanom-baovao maromaro no mandroso noho ny fiovana amin'ny fampiasana azy ireny, ny fomba ampiasain'izy ireo ary ny fomba fiasan'ny orinasa. Ireo loharanon'ny fiovana indraindray dia fanontaniana mahaliana momba ny fikarohana, saingy ireo fiovana ireo dia manasitrana ny fahafahan'ny loharano lehibe ahafahana manara-maso ny fiovan'ny fotoana maharitra.